शाहरुख खानको जस्तो ज्यान बनाउने ध्यानमा पुष्पल खड्का - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
शाहरुख खानको जस्तो ज्यान बनाउने ध्यानमा पुष्पल खड्का
३० पुष २०७४, आईतवार ०८:००
म्युजिक भिडियो हुदै सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पुष्पल खड्का धेरैले मन पराएका कलाकार हुन् । तथापी उनको सिनेमा ‘अफै पनि’ , ‘दर्पण छाँया २’ ले व्यवसायिक हिसाबले खास जादु गर्न सकेन । पुष्पलले अभिनय गरेको ‘मंगलम’ आउनै लागेको सिनेमा हो । तर पटक पटक प्रदर्शन मिति सारीरहेको मंगलम् पछि नायक पुष्पल हिजोआज के गर्दैछन् भनेर हामीले चासो राखेका छौँ । यसै सन्दर्भमा नायक पुष्पल खड्कासंग प्रभात लामाले आजको गफगाफ गरेका छन् ।
अहिले तपाईको दैनिकि कसरी बितिरहेको छ?
अहिले जिम क्लबमा नै दिन बितिरहेको छ । अब केही समय पछि मङ्गगलमको प्रोमोशनमा हिड्नुपर्ला ।
ज्यान बढाउँदै हुनुहुन्छ कि घटाउँदै हुनुहुन्छ?
ज्यान घटाउँदै बढाउदै छु । मोटाउने दुब्लाउने दुवै गरिरहेको छु ।
ज्यानको सेप कुन हलिउड वा बलिउडको अभिनेताझै बनाउन मन छ ?
मलाई अहिले त शाहरुख खानको ज्यान निकै मन पर्छ । उहाँकै जस्तो ज्यान बनाउने ध्यानमा छु ।
ज्यान बनाउन जिम बाहेक खानामा के के लिइरहनुभएको छ?
एक लाईनमा भन्नु पर्दा डान्स र एक्टिङ्गमा त्यति मेहेनत गरिन होला जति मेहेनत ज्यान बनाउन गर्नुपर्ने रहेछ । त्यही कारण खाने पिउने , उठ्ने ,बस्ने सबै काम ध्यान पुर्वक गर्दैछु । यसैको लागि दिनमा २ पटक जिम क्लव जाने गरेको छु ।
यसबाहेक अहिले तपाईको अरु व्यस्तता के मा हो?
‘मङ्गलम’ फागुनको २५ गते रिलिज हुने भए संगै अचेल जिम क्लवमा मेरो समय वितेको छ । ‘मन्द मन्द ’माघ एक गतेबाट फ्लोरमा जाने कुरा थियो । मंगलमको प्रदर्शन मिति सरेको कारण त्यो पनि पोष्टपोण्ड भएको छ ।
मन्द मन्द मा तपाई बाहेक को को कलाकारहरु हुनुहुन्छ?
शिल्पा पोखरेल, विनिता ओली र एक जना नयाँ कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँ फाईनल हुनुभयो या भएन त्यो मलाई थाहा भएन । जे होस् मन्द मन्दको तयारी भइरहको छ ।
म्यूजिक भिडियोहरुमा कतिको समय दिइरहनु भएको छ?
म्यूजिक भिडियोको लागि समय अलि कम गरिरहेको छु ।
खास कारण चाहि के हो?
अब यो सिनेमाको व्यस्तताको कारणले पनि होला । अहिले सिनेमाको लागि अलि धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने भयो । क्यारेक्टरको लागि कहिले के गर ,कहिले के गर गर्दा समय नै नमिल्दो रहेछ । यद्यपी समय मिलाएर म्युजिक भिडियो गरिरहेको छु ।
म्यूजिक भिडियोमा पुष्पलले जति जादु गर्न सक्यो त्यती सिनेमा भने गर्न सकेन भन्ने छन् नि ?
कति हतार गर्नु भएको हो हौ । भर्खर त म सिनेमा गर्दैछु । प्रदर्शनको हिसाबले दर्पणछायाँ २ त आएको छ । हतार नगर्नु न मलाई जज गर्नलाई । हो ,राम्रो थियो क्रेज मेरो म्यूजिक भिडियोमा । ग्याप पनि धेरै भयो दर्पण छायाँ २ पछि । अब हेरौँ कुनै न कुनै बेलामा मेरो पनि समय आउँला नि । म त्यो आवाजहरुलाई कुनै बेला शान्त बनाउने माहोल पनि बनाउने छु ।
पुष्पलले राईट ब्यानर र राईट टिम नपाएको हो त्यसो भए?
राईट ब्यानर र टिम पाएको हो । दर्पणछायाँ २ जस्तो नाम , तुलसी घिमिरे सर संग काम गर्न पाउनु मेरो लागि राइट ब्यानर , राइट टिम नै । तर सबै कुरा त्यसले मात्रै निर्धारण नहुदो रैछ । मैले भने नी मेरो एउटा मात्र त सिनेमा आएको छ । त्यही एउटा सिनेमाबाट यति धेरै कुरा किन ?
मङ्गलमबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
मङ्गलम एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ । अब दर्शकहरुको कतिको मन जित्न सक्छ सक्दैन भन्ने हो । आशा भने छ । किनभने चलचित्र राम्रो बनेको छ । नवल दाईले राम्रो सिनेमा बनाउनुभएको छ । कलाकारको काम र सिनेमाको स्टोरी पनि राम्रो छ । यो सिनेमाले छुट्टै छाप छोड्छ कि जस्तो पनि लागेको छ ।
मङ्गलमको पटक पटकप्रदर्शन मिती सर्दा निर्माण टिमलाई त असर पर्छ नै । तपाईलाई चाहि कतिको असर पर्ला ?
असर पर्छ । मङ्गलम असोज ११ गते भन्नुभयो । त्यसपछि तिहारमा मङ्गलम रिलिज हुने कुरो थियो । भएपछि पनि फागुन ४ गते प्रदर्शन हुने कुरो थियो । तिहार पछि नै मन्द मन्दको सूट हुने कुरा भयो । रिलिज डेट सरिरहदाँ अर्को चलचित्रमा हात हाल्न पाइएको छैन ।
आजको सिनेमा ‘पशुपति प्रसाद’
माग्ने ठूलो बनेको छैन: केदार घिमिरे माग्नेबुढो
कृ नायिका अदिति भन्छिन —अनमोल संग सिनेमा खेल्न पाउनु भाग्यले हैन क्षमताले हो ।
आर्थिक पाटोबाट मैले यो कार्यक्रमलाई हेरेको नै छैन आर्थिक लाभ भयो भने सर्जकको रोयल्टी…